Nissan ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အဓိကအခွံ Nissan စက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများအတွက် China Key shell
Nissan Sunny အတွက် Smart 3/4 Button Remote Key Shell Case ALTIMA MAXIMA Murano Versa Teana Sentra Infiniti G35 G37
Nissan Sunny အတွက် Smart34 Button Remote Key Shell Case ALTIMA MAXIMA Murano Versa Teana Sentra Infiniti G35 G37 အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button: ၃/၄ ခလုတ်များကွက်လပ်ကွက်လပ် - ရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်စတစ်ကာများ - မရှိ၊ ဘက်ထရီ - ထူးခြားချက်မရှိ။ ၁။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များနှင့်သော့ကိုအစားထိုးရန်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ ၄ ...
Nissan Qashqai Navara Micra NV200 ကင်းလှည့် Y61 Micra 350Z Pathfinder Key Case Fob 2/3 ခလုတ်များအတွက် Remote Car Key Shell
Nissan Qashqai Navara Micra NV200 Patrol Y61 Micra 350Z Pathfinder Key Case Fob ၂/၃ ခလုတ်များတပ်ဆင်မှု - Nissan အခြေအနေအတွက် ၁၀၀% အရောင်သစ်: ပုံကိုပြသခလုတ်များ - ၂/၃ ခလုတ်ခလုတ်ကွက်လပ် - ဟုတ်သည် Transponder Chip : အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီမရှိ။ အင်္ဂါရပ်များမရှိ။ ၁။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောသော့အိတ်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကို local locksmith / dealer မှဖြတ်ပါ။
Nissan Cube Qashqai Juke Suny Sylphy မတ်လ Tiida Micra Remote Fob အတွက်ခလုတ်ခုံ ၂ ခု၊
Case Fob အဝေးထိန်း Key Shell 2/3/4 Nissan Cube Qashqai Juke Suny Sylphy မတ်လ Tiida Micra အဝေးထိန်း Fob အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New Color: Black Button: 2/3/4 Button Key Blank: Yes Transponder Chip: No Electronics / ဘက်ထရီ - ထူးခြားချက်မရှိပါ - ၁။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. သင့်ရဲ့မူရင်းနှင့်အတူဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်များကဖြတ် Blade ကိုရယူပါ။ ပြည်တွင်းအီလက်ထရွန်ကိုယူပါ။
အသစ်အစားထိုး Remote Key Fob Smart Case NISSAN QASHQAI X-TRAIL MICRA မှတ်စုမှတ်စုစာလုံးအလုံးအတွက်ကားသော့ခွံအိတ်
အသစ်အစားထိုး Remote Key Fob Smart Case NISSAN QASHQAI အတွက် X-TRADEM MICRA မှတ်စုမှတ်စုစာလုံးအိတ်ခွံပုံစံအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ပစ္စည်းအမည် - အဝေးထိန်းခလုတ်ကားအဖုံးအလေးချိန် - ၃၅ ဂရမ် / pcs ခလုတ်များ - ခလုပ် ၂ ခု - ခလုပ် ၂ ခု - ခုတ်ဖြတ်ထားသည့်ဘလပ်ဒါဇင်ပြား - အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်မပါ။ / စတစ်ကာများ - မရှိပါ (အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ရောင်းရန် aliexpress တားမြစ်သည်!) ထူးခြားချက်များ - ၁၀၀% ကုန်ပစ္စည်းအသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သည်! ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသော့များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အပိုဆောင်းသော့ချက်အဘို့ကြီးသော။ ဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်မှဓါးသွားဖြတ်ယူပါ။ အဓိကဓါးသွားခုတ်လိုက်ရုံပါပဲ ...
Nissan Altima Maxima 350Z Armada ၂၀၀၅ ခုနှစ် ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အဝေးမှကားသော့ခတ် Fob 3/4 ခလုတ်များ Keyless Entry
Remote Car Key Shell Fob 3/4 ခလုတ်များ Nissan Altima Maxima 350Z Armada အတွက်သော့ချက်မဲ့သော့ချက် Entry 2004 2005 2006 2007 2008 2009 အခြေအနေ: 100% Brand New အရောင်: Black Button: 3/4 Buttons Key Blank: အမှတ်တံဆိပ်မပါ။ Transponder Chip: မရှိပါ အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - အလေးချိန်မရှိ - ၁၄ ဂရမ်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) - ၆၇ (L) x ၃၀ (W) x ၁၁ (T) အင်္ဂါရပ်များ - ၁ ။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်ဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ 2.Key case နှင့် uncut key Blade ကိုသာသုံးပါ။ 3. ဒေသခံတံဆိပျ / အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြင့်ဓါးသွားဖြတ်ခြင်း ...